Maalinta Adeegga ee midowga Seattle: Sabti, Meey 21, 2022 - Mayor | seattle.gov
Wax badan ka baro:
Adeega Seattle hal maalin waxay midayn doontaa bulshadeena Seattle - deganayaasha, kuwa aan faa'iido doonka ahayn, ganacsiyada, iyo ururada bulshada - maalin magaalada oo dhan oo ah fursado tabaruc ah oo la isugu imaado, wax lagu bixiyo, oo aan uga shaqayno Seattle horumarsan oo dhammaanteen ku faani karno inaan u wacno. gurigeena. Adeega Seattle hal maalin waxay dhacaysaa Sabtida, Meey 21, 2022.
Duqa magaalada Bruce Harrell waxa uu bilaabayaa adeega Seattle hal maalin ee ugu horeeya sababtoo ah wax yalaha uu qiimeeyo waxa ka mid wadajir, iskaashiga, iyo adeeg. Wuxuuna qorsheynayaa inuu qiyamkan Hal Seattle u beddelo waxqabad la wadaago iyo horumar macno leh oo magaaladeena ah iyo tayada nolosha dhammaan dadka deggan.
Adeega seattle hal maalin ee Meey 21, 2022 waa martiqaad furan oo deris kasta oo Seattle ah inay isu yimaadaan oo ay soo celiyaan, oo leh fursado tabaruc ah xaafad kasta oo magaalada oo dhan ah. Ku biirista koox kala duwan oo dadwayne, gaar ah, iyo hay'ado aan faa'iido doon ahayn, Magaaladu waxa ay horumarinaysaa fursado adeegyo oo kala duwan oo isugu jira nadiifinta jardiinooyinka iyo waddooyinka, Buuxinta raashinka meesha lagu kaydiyo cuntada, ku-deeqidda dhiig, iyo in ka badan.
Si aad isu diiwaan geliso tabaruce ahaan:
Fadlan buuxi foomkan (Ingiriisi).
Isku diwaangeli xaflada
Haddii aad u baahan tahay kaalmo si aad isu diwaangeliso ama haddii aad doorbidayso inaad iska diwaangeliso taleefoonka turjumaanka, fadlan wac: (206) 684-2489.
Wixii macluumaad dheeraad ah ama su'aalo ah, fadlan iimayl u dir: dayofservice@seattle.gov.
Macluumaadka la xiriira (Ingiriisi kaliya):
Raadso fursadaha tabaruc ah ee magaalada ka socda